Mucjisada nambarka Toddobaad (7) - Caasimada Online
Home Warar Mucjisada nambarka Toddobaad (7)
Mucjisada nambarka Toddobaad (7)
Dunidan guudkeeda waxaa saaran oo aad ku arkeysa wax yaabo ku tusinaya waano iyo cibro qaadasho, waxaan ku eegeynaa qormadeena xikmadooyinka qaar oo laga helo tirooyinka xisaabta hadii aan soo qaadano xikmadooyinka ku jira number (7)
Ma ogtahay akhristow in (suuratul faatixa) inay tahay (7) aayadood.
Ma ogtahay in qur’aanka lagu sheegay (7) saccood.
Ma ogtahay maalmaha isbuuca in ay yihiin (7) maalmood.
Ma ogtahay in salaada marka la sujuudo la dhigo dhulka (7) xubnood.
Ma ogtahay marka dhagax tuurasha ay tahay (7) jeer.
Ma ogtahay in samooyinka ay yihiin (7) samo.
Ma ogtahay in badaha ay yihiin (7) badood.
Ma ogtahay in dhulku uu yahay (7) arlo.
Ma ogtahay in qaaradaha dunida ay yihiin (7) qaaradood.
Ma ogtahay akhristow dagaalkii qaydara uu dhacay sanadkii (7) aad ee hijriyada.
Ma ogtahay in hadii ay ilmo kuu dhashaan maalinta (7) aad loo wan qalo.
Ma ogtahay in ilmaha lagu amro salaada marka ay gaaraan (7) jir.
Ma ogtahay akhristow in lamaaha is guursada ay (7) galaan.
Ma ogtahay in qur’aanka uu yahay (7) jalaad.
Ma ogtahay in maalinta qiyaamaha hooska alle mooye uusan jirin hoos kale ay harsan doonan hooska alle (7) qofood.
Ma ogtahay in albaabada naarta alle hanaga koriyee ay yihiin (7) albaab.
Ma ogtahay akhristow in malikii masar uu ku riyooday (7) riyo.
Ma ogtahay akhristow In taabashada eyga la meyro (7) jeer.
Ma ogtahay akhristow in caruurta nabi muxamad (NNKH) ay ahaayeen (7) caruur ah.
hadaba akhristow bal malee oo raadi tiro ka xikmad badan number (7) oo yeelan karta si fooyinka aan kor ku soo sheegnay taasoo ay gaar u yihiin tirada number (7) xikmadaasi waxay tahay una badan diini oo uu alle ku galadeystay number (7) hodana ku ah xikmadahaasi.
W/Q: Mohamed Ahmed Halane